I-Poke Radar, kodwa omnye umkhonyovu kwiVenkile ye App | IPhone iindaba
I-Poke Radar, kodwa omnye umkhonyovu kwiVenkile ye App
Umkhuhlane wePokémon usenza siphulukane nombono wokungakhathali, iVenkile yeApple ikhathazwe zizicelo esimele ukuba sibaleke kuzo, iinjongo zazo ayizukusinceda, kodwa kukufumana ulwazi kunye nemali kangangoko. Namhlanje sifumana okwesibini kukhuphelo oluvela kwiVenkile ye App ukuya kwiPoke Radar, isicelo esicacileyo sesithiyelo esingenamsebenzi kwaphela. Esi sicelo ngokuqinisekileyo asiphuhliswanga kakuhle, kodwa siyilelwe ngempumelelo ukudida abadlali bePokémon Go abafuna ukufumana indlela emfutshane ebenza babazingele bonke.
I-Poke Radar kufuneka isetyenziselwe ukufaka iPokémon ekufuphi. Ingxaki kukuba esi sicelo asiyomfuneko kwaphela, siyakukhumbuza ukuba I-Pokémon Go ine "Poke Radar" yayo:
Xa sihlala simisiwe endaweni enye, sinokwandisa umbono wembonakalo yePokémon Go kwaye siya kuqaphela ukuba kwezinye iindawo kuphuma ingca encinci. Ukuba siya khona, kuya kuvela iPokémon.
Ngokutsho komphuhlisi, iPoke Radar ngumncedisi ekufumaneni indawo yayo nayiphi na iPokémon, into engayi kuba njalo. Nangona kunjalo, kuyinyani ukuba xa kukho iSkirtle kwenye indawo, ihlala ifumaneka ixesha elide kubasebenzisi abaliqela, esi sicelo sithembisa ukusebenzisa ulwazi lwethu ukubonisa eyona ndawo apho kuya kubakho iPokémon ethile. Ayinyani le, kuba kunokwenzeka ukuba, xa ufika, awusayi kubakho. Okwangoku, usetyenziso lusebenzisa idatha esiyibonelela ngayo. Kusebenza ngakumbi ngakumbi ekunxibelelaneni nabahlobo bethu ukufumanisa ukuba yeyiphi i-Pokémon enomdla abayithathileyo. Ialgorithm yePokémon Go ayiyi kuvumela iPokémon ethile ukuba ibanjwe ixesha elide endaweni enye, ngenxa yoko iPoke Radar ayifanele isebenze kwaphela. Ukuba usibonile esisicelo, funda amagqabantshintshi kwaye uyabona ukuba ayizukuyenza inkonzo ethenjisiweyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Izaziso » I-Poke Radar, kodwa omnye umkhonyovu kwiVenkile ye App
Ubuqhetseba? Andiboni ubuqhetseba ukuba akukho mali ibandakanyekayo.
Impendulo ku .....
Ngaba ngokwenene ucinga ukuba ngokuya apho kuphuma khona ingca uya kufumana into? Kubonakala kum ngathi uwudlalile umdlalo omncinci.
Kwaye kwelinye icala, njengoko ingxelo edlulileyo isitsho: uphi umkhonyovu, ukuba awuyibhatali le app?
ziphi iindaba. Okokuqala, kuya kufuneka uzazise malunga nePokeRadar kunye nePokemon eziya yona. Ukuba awunalwazi kakhulu
Njengokuba zombini i-Sensato kunye ne-GSBNemec isitsho, i "radar" ukuyibiza ngandlela ithile eza nomdlalo akunamsebenzi, ukuba uya kule ndawo ikhula kuyo ingca, akukho nto ivelayo, ubona kuphela ingca ikhula kwenye indawo, phaya, nangaphezulu ngokufanayo, awufumani nto kwaye ubona ukuba ingca iyaphuma kwenye indawo kwaye njalo ukuya kubomi obungapheliyo. Ngokunyaniseka, inkqubo yokukhangela ebandakanyiwe kumdlalo ayinaxabiso.
Iya kuthakazelelwa into yokuba umntu onolwazi ngakumbi asikhokele kancinane kwindlela yokuzijonga.
Molo, ebichu. Kulindeleke ukuba kwiindawo apho ubona ukubila, kuvele i-Pokémon MAY. Oko kukuthi, iindawo ezinengca yindawo apho ixesha nexesha livela khona.
Kuya kubakho izixhobo ezingcono kwixesha elizayo, kodwa ngoku unokuhamba kuphela ujonge ukuba ifowuni yakho iyangcangcazela. Isangqa esifana nesikhutshwa yi-avatar yakho sikwabonakala xa iPokémon ikufuphi. Ezo zangqa ngamanyathelo.
Ukutsala okucocekileyo ... kungcono ukubonwa kwe-pokevision. ukuba akunjalo, umdlalo uya unqwenela kwaye kungekudala okanye kamva abasebenzisi abaninzi baya kuba bengenamdla
I-Pokémon Go ifikelela kumazwe angama-26 kwaye igcwalisa iiseva kwakhona
I-Pokémon GO ibiphantsi kwihlabathi liphela ngohlaselo lwe-DDoS